ညီလင်းသစ်: ကြယ်ကြွေည သန်းခေါင်ယံ
Posted by ညီလင်းသစ် au 12.8.13
ဘယ်လိုအလုပ်ကိုလုပ်လုပ် စနစ်တကျ ပီပီပြင်ပြင် လုပ်တတ်လေ့ရှိတဲ့ မောင်ညီလင်းကို ချီးကျူးမိတာ အခါခါပဲ... ကြယ်ကြွေညရဲ့ ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့အတူ စိတ်ဝင်တစားလေ့လာဖတ်ရှုသွားတယ်နော်...
စာလုံးပေါင်းခွင့်လျွတ်။ မမြင်ရလို့ ။
ဒီလောက်များတဲ့ကြယ်တွေ နဂါးငွေ့တန်းတွေကို ပုံတွေထဲမှာပဲမြင်ဖူးသေးတယ်...။ အစ်ကို့လက်ရာကိုကြည့်ရတာ ပန်းချီကားတစ်ချပ်နဲ့တောင်တူနေသေးတယ်...။ အပြင်မှာတကယ်အဲလိုကြယ်တွေအများကြီးနဲ့ ကောင်းကင်ကိုမြင်ခွင့်ရချင်သေးတယ်။
It is beautiful and cool brother.
အိုးးး သိပ်လှပါလား ကြည့်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် :)
ညရဲ့ တိတ်ဆိတ်ခြင်းတွေမှာ ကြယ်တွေကို အာရုံစိုက်
ဓာတ်ပုံရိုက်ယူနေတဲ့အချိန် စိတ်ခံစားမှုကို တွေးကြည့်တယ်..
ကြယ်ကြွေတွေကို ကြည့်ပြီးဆုတောင်းရင် ပြည့်သတဲ့ .
ကိုညီလင်းကတော့ သဘာဝ အလှကို ခံစားနေမှာနဲ့ ဆုတောင်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး ။
ကြယ်ကြွေတွေကြည့်ပြီး စိတ်အေးချမ်းမှူရသလို အမြဲ စိတ်အေးချမ်းပါစေ ။ ကျမရဲ့ အညတရ ဘလော့လေးကို အချိန်ပေးပြီးလာလည်လို့ အားနာရသလို ကျေးဇူးလဲတင်ပါတယ် ။
ကိုညီလင်းသစ် ရေ ကြယ်လေးတွေကို မြင်ရတာ စိတ်ကို အေးချမ်းတယ်နော်။ မလေးကကြယ်လေးတွေကိုသဘောကျတယ်။ ဓါတ်ပုံတွေကိုတ၀ကြီးကြည့် သွားပါတယ်။
Those are really precious photos. Thanks for your time to take the photos and sharing with us.
သတင်းစာမှာ ရေးထားတာတွေ့ ကတည်းက ကြည့်ချင်မိတာ..မြို့ရဲ့ တောင်ဖက် ၅၅ မိုင်မှာ ကြည့်လို့ ရတယ်...အိမ်ကနေ လှမ်းကြည့်တော့ ဘာမှမမြင်ရဘူးရယ်...ဓာတ်ပုံတွေ တကယ်မိုက်တယ်...ISO 3200 နဲ့ f/2.8 မှာထားပြီး intervalometer timer နဲ့ စက္ကန့်သုံးဆယ် အလင်းပေးပြီး ရိုက်တာကို စမ်းဦးမယ်...:)
ဓာတ်ပုံတွေလှတယ်။ အဲလို ရိုက်တတ်ချင်တယ်။
ပစ်တို့ဆို ဘာမှန်းတောင် မသိလိုက်ပါဘူး..
Deadly thanks! :D
တီတင့်ကတော့ လူတစ်ဖက်သားကို အမြဲပဲ ချီးကျူးတတ်သူ ပဲနော်၊ ကျေးဇူးပါ တီတင့်ရေ...၊
ဟုတ်တယ်ဗျ၊ မှောင်ရင် ကြယ်တွေက အခုထက်ပိုပြီး လင်းမှာ...၊
ကျေုးဇူးပါ ညီမရေ..၊ အင်း.. မြန်မာပြည်မှာတော့ ဆောင်းတွင်းလို အချိန် အညာဖက်တွေမှာ ပိုပြီး မြင်နိုင်မယ် ထင်တယ်နော်...။း)
ဒီမှာလည်း ပူတုန်းပဲဗျ၊ နေ့ရောညရော short pant ပဲ ဝတ်နေရတယ်၊ အဲဒီညကတော့ လေပြေနည်းနည်း တိုက်နေလို့ လိုလိုမယ်မယ် ယူသွားတာပါ..၊း))
ဟား.. တိတ်ဆိတ်ငြိမ်းချမ်းမှုကတော့ တကယ့်ကို အပြည့်ပဲဗျို့၊ တခါတခါမှ ကြားရတဲ့ အဝေးကားသံ တချို့ကလွဲရင် သစ်ရွက်ကို လေတိုးသံပဲ ကြားနေရတယ်...၊း)
အာ.. အညတရ ဘလော့ဂ်ရယ်လို့ မရှိပါဘူးဗျာ၊ စိတ်ထဲရှိတဲ့ အတိုင်း ရေးကြတာကို ခင်ခင်မင်မင် လာဖတ်နေကြရင် ပြီးတာပဲ မဟုတ်လား၊း) အခုလို လာလည်တာလည်း ကျေးဇူးပါ... နော။
ဟုတ်ပါတယ်၊ တိတ်ဆိတ်တဲ့ ညချမ်းနဲ့ မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ် ကြယ်လေးတွေက စိတ်ကို အေးချမ်းစေတာ အမှန်ပါပဲ၊ လာလည်တဲ့ အတွက်လည်း ကျေးဇူးပါနော်၊
Thank you so much for your appreciation and for your kind comment...!
မီးရောင်တွေနဲ့ ဝေးနိုင်သလောက် ဝေးအောင်သွားမှပဲ တွေ့ဖို့ အဆင်ပြေတာ ညီမရဲ့၊ နောက်တစ်ခါဆို စမ်းသာစမ်းကြည့်ဗျာ၊ astrophotography ရိုက်ရတာ ဒီလောက်ကြီး မခက်လှပါဘူး၊း)
ကျေးဇူးပါဗျာ..၊ ရိုက်တတ်ချင်ရင် တစ်ခါလောက် စမ်းကြည့်ပါလား၊ ဒီလောက်ကြီး မခက်ခဲပါဘူး...၊း)
အားမငယ်ပါနဲ့ ညီမရာ...၊ လောလောဆယ် ကြည့်ဖို့ အဆင်မပြေသေး ရင်လည်း တစ်ချိန်ချိန်မှာတော့ ဖြစ်လာမှာ သေချာပါတယ်...။
Lyrics of Vincent came across my mind as soon as I see the photos.
The Great Captures...
တစ်ခါလောက် စမ်းရိုက်ကြည့်ဖို့ တော့ ကြိုးစားနေမိတယ်။။။။ :)
အဲဒီနေ့က ကလေးတစ်ယောက်ကတော့ပြောသား...ဆရာတဲ့ ဒီည ကြယ်မိုးရွာမယ်တဲ့...ဟာ ကြယ်မိုးရွာရင်တော့ ဆရာတို့ခေါင်းမှာ အာလူးသီးတွေထကုန်မှာပေါ့လို့ အရွှန်းဖောက်လိုက်မိသေး...
ဓာတ်ပုံတွေကို ကြည့်လိုက်မှပဲ အတော်လှတာ သိလိုက်ရတော့တယ်...အေးဗျာ မမြင်လိုက်ရတာ နာတာပဲ...
လှတယ် လှတယ် ပုံတွေကြည့်ပြီး စိတ်အေးချမ်းလိုက်တာ
အသိဆရာကြီးတယောက် စာရေးရင် သူ့မဟေသီအကြောင်း အမြဲပါတယ်။
မအိမ်သူကို ဂွတ်တနိုက် လိုက်ရသေးတယ်။
စာမရေးဖြစ်လို့ ဧရာ စာလုံးဘယ်လိုရိုက်ရမလဲ မေ့ချင်ချင် ဖြစ်နေသူ
ကြယ်ကြွေတာတော့ နောင်နှစ်များမှ ကြည့်တော့မယ်အေ